Xaalada deegaano ka tirsan Gobolka Gedo oo shalay lagu dagaalamay oo Maanta degen – SBC
Xaalada deegaano ka tirsan Gobolka Gedo oo shalay lagu dagaalamay oo Maanta degen
Posted by Webmaster on Noofember 29, 2011 Comments
Xaalada Deegaanka Garbahaareey iyo duleedkeeda ayaa maanta degen ka dib markii halkaasi ay maalin nimadii shalay ka dhaceen iska hor imaadyo dhexmaray Ciidamada DKMG ah ee gobolka Gedo ku sugan iyo kuwa Ahlusuna waljamaaca oo isku dhinac ah iyo xarakada Shabaab Almujaahidin.
Sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka waxaa uu iska horimaadka degmaray labada dhinac yimid ka dib markii weerar ay soo qaban qaabiyeen Xoogaga xarakada Alshabaab ay ku soo qaadeen duleedka deegaanka Gabaraaheeer halkaas oo uu ku yiilay fariisin ay ciidamada DKMG ah leeyihiin.
Waxaa labada dhinac ay isku adeegsadeen cubka noocyadiisa kala duwan, kuwa cul culus iyo kuwa fudfuduba ay lahaayeen, Mana jiraan wax war ah oo ka soo kala baxay labada dhinac oo qiraya sida ay wax u jiraan iyo khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay Hubkii la isku adeegsanayay.
Sida kale xaalada ayaa waxa ay tahay mid maanta degeneyd waxaana ay xaqiijiyeen ilo wareedyo halkaasi ku sugan in duleedyada deegaanadii lagu dagaalamay shalay ay ka jiraan xiisado dagaal iyo dhaq dhaqaaqyo ciidan oo ay wadaan labada dhinac.
C/qadar Maxamed Siraad